सुडोकु 🥇 प्रविष्ट गर्नुहोस् र emulator.online बाट आनन्द लिनुहोस्
Sudoku एउटा खेल हो जुन नम्बर पजल जस्तै देखिन्छ। तार्किक-गणितीय तर्क र रणनीतिक सोच उत्तेजित गर्दछ। सुरुमा यो एकदम गाह्रो लाग्न सक्छ, तर तपाईं देख्नुहुनेछ कि थोरै अभ्यासको साथ, उपयुक्त रणनीतिहरू थाहा पाएर, प्रत्येक दिन सजिलो र अधिक मनोरन्जनात्मक हुनेछ।
सुडोकु: कसरी चरण by कदम खेल्ने
तपाईं एक पाउन सक्नुहुन्छ विशाल वर्ग जुन धेरै साना वर्गहरूमा विभाजित छ, र यी सानो वर्गहरू मध्य वर्गमा समूहीकृत गरियो। प्रत्येक मध्यम वर्ग भित्र small वटा सानो वर्ग छ।
खेलको उद्देश्य नम्बरसहित खाली वर्गहरू भर्नु हो, ताकि:
सबै लाइनहरु (तेर्सो) सँग सबै नम्बर १ देखि from सम्म कुनै पनि दोहोर्याईएन।
सबै स्तम्भहरू (ठाडो) सँग सबै नम्बर १ देखि from सम्म कुनै पनि दोहोर्याईएन।
सबै मध्य वर्ग तिनीहरूसँग १ देखि from सम्म सबै नम्बरहरू छन् कुनै पनी दोहोर्याईकन।
सुडोकु भनेको के हो?
राम्रो जापानीमा, नाम हामी सबैलाई थाहा छ वाक्यांशको सरलीकरण बाहेक अरू केहि छैन "suji wa dokushin नी कागिरु", यसको मतलब के हो"संख्या अद्वितीय हुनुपर्दछ"र यो धेरै साधारण निर्देशनहरूको साथ एक साधारण साधारण संख्यात्मक शगल को जनाउँछ जसको उद्देश्य क्रमबद्ध संख्यात्मक अनुक्रमको माध्यमबाट सबै खाली बक्सहरू भर्नु हो। यसलाई समाधानको लागि तर्क र तर्कको आवश्यकता छ।
सुडोकु ईतिहास 🤓
यसको नामको बावजुद, सुडोकु जापानमा सिर्जना गरिएको थिएन, आविष्कार स्विस गणितज्ञलाई श्रेय दिईन्छ लियोनहार्ड युलर XVIII शताब्दीमा, उहाँले के भनिन्छ सिर्जना गर्नुभयो "ल्याटिन वर्ग", एक खेल जसमा तथ्या्क प्रत्येक प row्क्ति र प्रत्येक स्तम्भमा एक पटक मात्र देखा पर्दछ। R पows्क्ति र col स्तम्भहरू जब लोकप्रिय भयो अमेरिकामा प्रकाशित हुन थाल्यो। १ 1970 s० को दशकमा।
यो त्यहाँ थियो 1984, जब जापानी माकी काजी खेल भेटे। आफ्नो मातृभूमि फर्किएपछि, काजीले खेल सुधार गर्‍यो (उनले क्लाग नम्बर दिए जुन पहिले नै बाकसमा देखा पर्‍यो, र कठिनाईका विभिन्न डिग्रीहरू सिर्जना गर्‍यो, बप्तिस्मा गर्‍यो र आफ्ना साथीहरूलाई यो ज्वरोमा परिणत गर्‍यो: आज जापानमा Sud००,००० भन्दा बढी पत्रिकाहरू सुडोकुमा विशेषज्ञ छन्।
पश्चिममा २०० 2005 मा जूवा खेल्ने पागल भयो। पहिलो चरण १ 1997 XNUMX in मा लिइएको थियो, जब न्युजील्यान्ड वेन गोल्ड जापानको भ्रमण गर्छिन्, सुडोकुको बारेमा सिके र २०० 2004 मा जारी गरिएको खेलको लागि कम्प्युटर प्रोग्राम विकसित गर्यो। his महिना अघि उनका खेलका रचनाहरू द टाइम्स अखबारले दैनिक प्रकाशित गर्न थाल्छ जुन चाँडै विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा पछि आयो।
परम्परागत बाहेक सुडोकुका प्रकारहरू:
विकर्ण: खेल्नको लागि, तपाईंले परम्परागत सुडोकुको समान नियमहरू पालना गर्नै पर्छ, त्यो हो, तेर्सो र ठाडो लाइनहरूमा दोहोरिन बिना, १ देखि from सम्मका नम्बरहरू प्रयोग गरेर सबै वर्गहरू पूरा गर्नुहोस्। यस सुडोकु पज्जलको सब भन्दा उल्लेखनीय पक्ष भनेको, ठाडो र तेर्सो रेखा जोड्नका साथै तपाईंले दुई केन्द्रीय विकर्ण X बनाउनुपर्नेछ, १ देखि from सम्मका अंकहरू र ती आफैं दोहोरिने छैनन्।
अनियमित: यससँग क्लासिकको समान नियमहरू छन्, वर्गहरू अनियमित बाहेक।
काकुरो: काकुरो खेल्नु धेरै गाह्रो छैन, यद्यपि यसलाई सुडोकु भन्दा बढी जटिल मानिन्छ। उद्देश्य १ देखि from सम्म नम्बर राख्नु भनेको तिनीहरू लाइनको क्रममा र स्तम्भको क्रममा दोहोरिने छैनन्, आवश्यक हुनुपर्दछ कि अ of्कको योग (तेर्सो वा ठाडो) सम्बन्धित बिन्दु बराबर हो। ।
किलर: यो सुडोकु र काकुरोको मिश्रण हो। त्यसकारण, त्यहाँ सीमांकित क्षेत्रहरू छन् जहाँ त्यहाँ दोहोर्याउने संख्याहरू हुन सक्दैनन् र जसको योगफलले संकेत मान प्रदान गर्नुपर्दछ।
मेगासुडोकु: तपाईंले अंकहरू १ देखि १२ सम्म प्रत्येक प row्क्ति, स्तम्भ, र वर्गमा एक पटक देखा पर्नु पर्छ। परम्परागत जस्तै समान तर तीन थप नम्बरहरूको साथ।
Minisudoku: यो वर्ग संख्या को एक सानो संख्या बाट बनाएर परम्परागत एक भन्दा फरक छ।
Multisudoku: यो धेरै सुडोकु पजलहरू मिलेर बनेको छ जो सँगै एक बनाउँदछ।
सुडोकु solve समाधान गर्न सुझावहरू
सुडोकु समाधान गर्न सुरु गर्नका लागि पहिलो कुरा भनेको हो मार्गदर्शन गर्न ढाँचा छनौट गर्नुहोस् (प row्क्ति, स्तम्भ वा वर्ग) यदि तपाईं केवल एउटा छान्नुहुन्न र एकैचोटि सबै गर्न को लागी प्रयास गर्नुहुन्न भने, तपाईं शफलिंग र भ्रामक चीजहरू अन्त्य गर्न सक्नुहुनेछ, जसले तपाईंलाई खेलमा धेरै समय लिनेछ।
भन्नुहोस्, उदाहरण को लागी, तपाइँ लाइनहरु द्वारा समाधान शुरू गर्न को लागी छान्नुभयो। त्यसोभए तपाईले पहिलो क्षैतिज रेखा विश्लेषण गर्नुहुनेछ र देख्नुहुनेछ कि कुन नम्बरहरू यसमा पहिले नै छ र कुन हराइरहेको छ। खाली वर्गहरूमा छुटेका नम्बरहरूसहित भर्नुहोस्। यो स्वतः दोहोरिने छैन भनेर निश्चित गर्न स्तम्भमा संख्याहरूमा ध्यान दिएर।
पहिलो लाइन समाधान गरेपछि, दोस्रो लाइनमा जानुहोस् र प्रक्रिया दोहोर्याउनुहोस्। हेर्नुहोस् कुन नम्बर तपाईसँग पहिल्यै छ र कुनले भर्ने सुरू गर्न हराइरहेको छ। यदि तपाईंसँग दोस्रो रेखामा नम्बर १ छैन भने, पहिलो खाली वर्गमा जानुहोस् र १ लेख्नुहोस्। त्यसपछि त्यो वर्गको लागि स्तम्भ हेर्नुहोस्। यदि नम्बर १ पहिले नै त्यो स्तम्भमा अवस्थित छ भने, यसलाई हटाउनुहोस् र १ अर्को वर्गमा लेख्नुहोस्। सधैं जाँच गर्न याद गर्नुहोस् कि यदि तपाईले पहिले नै वर्गमा रहेको कुनै नम्बर दोहोर्याउनुभएको छैन भने।
यस तालको अन्त्यसम्म अनुसरण गर्नुहोस्, र तपाईं आफ्नो सुडोकु खेल निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। अन्तमा, यो ठाउँ फेला पार्न गाह्रो हुन्छ जुन नम्बरहरू दोहोर्याउँदैनन्, तर केहि पनि ठाउँ स change्ख्या परिवर्तन गर्न को लागी सजिलो बनाउन को लागी गरीरहेको छ।
सुडोकु: रणनीतिहरू 🤓
यहाँ सुडोकू पज्जल समाधान गर्नका लागि केहि सरल सल्लाह र रणनीतिहरू छन्।
मार्कहरूको प्रयोग गरेर, तपाईं यी धेरै सरल (र स्पष्ट पनि) सुझावहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:
कुनै पनि बिन्दुमा, खेलहरूमा सेलहरू नजिकबाट हेर्नुहोस् जुन केवल एक अंकमा अंकमा छ। यसले संकेत गर्दछ कि त्यहाँ सेलको लागि मात्र एक मात्र सम्भावना छ।
लुकेका संख्या मात्र
प्राय: नजिकबाट हेर्दा, तपाईले "फेला पार्न सक्नुहुन्छ"लुकेका संख्या मात्र"यो संख्या केवल अंकमा देखा पर्दैन। यो प row्क्ति, स्तम्भ वा 3x3 ग्रिडमा मात्र सम्भव उम्मेदवार हो, यो अन्य नम्बरहरूको मध्यमा मात्र देखा पर्दछ। छविलाई छेउमा हेर्नुहोस्:
यस छविमा, तपाईले देख्नुहुनेछ कि १ र and नम्बरहरू एक पटक तिनीहरूको सम्बन्धित 1x8 ग्रिडहरूमा एक पटक देखा पर्दछ। यसले संकेत गर्दछ कि ती आवश्यक रूपमा ती स्थितिहरूमा राख्नुपर्दछ।
१. यदि कुनै पनि समयमा तपाईंले एउटै समूहको अंकमा मात्र प ,्क्ति फेला पार्नुभयो (प row्क्ति, स्तम्भ वा ग्रिड), यसको मतलब यो हो कि यो जोडी यी दुई कक्षहरूमा आवश्यक रूपमा देखा पर्दछ। तल छवि हेर्नुहोस्:
२. यस छविमा हामी देख्दछौं कि १ र numbers नम्बरहरू दुई कक्षहरूमा एक्लै देखा पर्दछन्, त्यसैले तिनीहरू कक्षहरूमा प्रयोग हुनुपर्दछ। हामीलाई थाहा छैन प्रत्येक सेलमा कुन नम्बर जान्छ। जहाँसम्म, हामीलाई थाहा छ कि १ र numbers संख्याहरू अन्य खाली सेलहरूमा देखा पर्दैन। तसर्थ, हामी प्रत्येक मा एक मौका छ।
कुनै लेबल🤓 छैन
जो ब्रान्ड प्रयोग गर्न चाहँदैनन्, हामी एक धेरै सरल र धेरै उपयोगी रणनीति वर्णन गर्नेछौं।
क्रस गरिएका लाइनहरू
क्रस गरिएको लाइन प्रविधि सम्भवतः छ सुडोकु खेल्दा सब भन्दा पहिलो चीज मानिसहरूले सिक्छन्। खेलाडीहरूले गर्नबाट सिक्छन्, किनकि यो सरल र आधारभूत छ।
यसमा, खेलाडीले एउटा नम्बर छनौट गर्नुपर्दछ (सामान्यतया एक जुन खेलमा सब भन्दा पहिले देखा पर्दछ) र रेखा र स्तम्भहरूमा काल्पनिक रेखाचित्र कोर्नु पर्छ जसमा त्यो नम्बर छ।
निम्न उदाहरणमा हामी संख्या choose लाई छनौट गर्दछौं जहाँ हामी यो उपस्थित भएका सबै ठाउँहरू फेला पार्छौं र लाइनहरू र स्तम्भहरूमा काल्पनिक रेखाचित्रहरू तान्दछौं जुन स indicate्ख्या9लाई ती स्थानहरूमा राख्न सकिदैन। एकचोटि यो काम सकिएपछि, हामी हरियोमा स्वतन्त्र स्थिति मार्क गर्दछौं।
नोट : यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि केहि खाली कक्षहरू, यद्यपि तिनीहरू काल्पनिक रेखा द्वारा हटाइएनन्, नि: शुल्क चिन्ह लगाइएन किनकि तिनीहरूसँग 9x नम्बरको समान 3x3 ग्रिडमा छ।
स्वतन्त्र स्थितिहरूको विश्लेषण गरेर हामी देख्न सक्दछौं कि केन्द्रीय 3x3 ग्रिडमा नम्बर for को लागी एक मात्र स्वतन्त्र स्थिति छ, त्यसैले हामी त्यसलाई त्यो स्थानमा राख्न सक्दछौं।
एक पटक यो सकिएपछि, हामी संख्याको लागि काल्पनिक रेखाहरूको प्रक्रिया दोहोर्याउँछौं जुन हामीले भर्खरै राखेका छौं। परिणाम जाँच गर्नुहोस्:
फेरी हामीले नयाँ आन्दोलनको खोजीमा खाली स्थानहरू विश्लेषण गर्नुपर्दछ। हामी देख्न सक्छौं कि तल्लो केन्द्रीय ग्रिडमा त्यहाँ केवल एक खाली स्थान छ। त्यसो भए हामी संख्या number राख्छौं र माथिको प्रक्रिया दोहोर्याउन सक्छौं।
यस पटक एकल स्वतन्त्र स्थिति तल्लो बायाँ कुनामा देखा पर्‍यो, त्यसैले हामीले त्यस स्थितिमा9राख्यौं र रणनीति जारी राख्यौं।
अब हामी देख्न सक्छौं कि हामीसँग9नम्बरका लागि चार नि: शुल्क स्थानहरू छन्, जुन मध्ये कुनै पनि यसमा रहेको 3x3 ग्रिडमा अद्वितीय छैन। तसर्थ, हामी थाहा छैन कहाँ राख्न9यो रणनीति एक्लै प्रयोग गरेर।
एउटा सम्भावित तरीका हो नयाँ नम्बर छनौट गर्नुहोस् र भर्खर वर्णन गरिएको यो रणनीति दोहोर्याउनुहोस्। तपाईं सम्भवत यो रणनीति प्रयोग गरेर धेरै सेलहरू भर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
अब तपाइँसँग केहि रणनीतिहरू छन्, रमाईलो गर्नुहोस् र सुडोकु खेलेर दिमागको व्यायाम गर्नुहोस्
सुडोकु एक खेल हो जुन केहि समय र सोच आवश्यक हुन्छ, तर एकचोटि तपाइँ नियमहरू जान्नुहुन्छ, यो खेलनको लागि यथोचित सजिलो हुन्छ।
सुडोकु सामान्यतया एक 9x9 तालिका को हुन्छ, जो बनेको छ Gr ग्रिडहरू, कि छ Cells कोशिका क्रमशः.
खेलको मुख्य विचार भनेको खेलाडी हो तपाईले टेबल १ देखि from सम्म नम्बरमा भर्नुपर्नेछ, एउटै लाइन वा ग्रिडमा कुनै नम्बरहरूको पुनरावृत्ति बिना।
यदि तपाईं यी सबै नियमहरू पालना गर्नुहुन्छ र टेबल भर्न प्रबन्ध गर्नुहुन्छ, तब खेल जित्नेछ!
Sudoku तालिकाहरू एकल समाधान गर्न डिजाइन गरिएको थियो र त्यस्तै, यो सामान्य छ कि हामी यसलाई पहिलो पटक प्राप्त गर्दैनौं।
यसै कारणका लागि, धेरै प्लेयरहरू पेन्सिलमा नम्बरहरू लेख्न रुचाउँछन् ताकि यदि तिनीहरूले गल्ती गरे भने तिनीहरू मेटाउन सक्दछन्।
विचार गर्नुपर्ने अर्को सुझाव हो ट्रेडमार्क को उपयोग। ब्रान्डबाट, हामी मतलब गर्छौं प्रत्येक कोष भित्र बिभिन्न सम्भावनाहरु लेख्दै। त्यो हो, यदि सेलमा3र have स numbers्ख्या हुन सक्छ भने, आदर्श भनेको (सानो साइजमा) दुबै स indicate्केत गर्दछ र बाँकी तालिकालाई समाधान गर्नुपर्दछ, त्यो सेलसँग सम्बन्धित नम्बर नपुगुन्जेल।
सुडोकुको केहि संस्करणहरूमा, यी सानो मार्कहरू पहिले नै टेबलमा सामेल छन्, तिनीहरूको रिजोलुसनलाई सजिलो पार्न। यी संस्करणहरूमा पहिले नै मार्कहरू समावेश छन्, त्यहाँ केही तरिकाहरू छन् जसले तपाईंलाई पज्जल समाधान गर्न मद्दत गर्दछ:
जब कुनै सुडोकु तालिकामा (मार्कहरू सहित) तपाईंले एउटा सेलमा मात्र नम्बर भेट्टाउनुहुन्छ, यो हो संकेत गर्नुहोस् कि त्यहाँ एउटै सेलको लागि केवल एक मात्र सम्भावना छ, त्यो हो, तपाईंले सेलमा तुरून्त त्यो नम्बर डायल गर्नै पर्दछ।
सुडोकु कहिलेकाँही जटिल खेल पनि हुन सक्छ, तर हामीलाई गेम पत्ता लगाउन मद्दत गर्नको लागि त्यहाँ सानो चालहरू छन्। उदाहरणका लागि, खेलहरूमा जहाँ ब्रान्डहरू छन्, हामी कहिलेकाँही तथाकथित फेला पार्दछौं "लुकेका संख्या मात्र".
यो संख्या सेलमा मात्र देखा पर्दैन (अन्य नम्बरहरू सहित), तर यो प row्क्ति, स्तम्भ वा 3x3 ग्रिडमा सम्भव उम्मेदवार हो।
त्यो हो, जब 3x.०3 ग्रिडमा, उदाहरणका लागि, नम्बर appears देखा पर्दछ र त्यो ग्रिडको कुनै पनि सेलमा देखा पर्दैन, तब यो सator्केत हो कि3नम्बर उही सेलको हो।
जब सम्म तपाइँले 3x3 ग्रिडको मार्कहरूमा केवल समान जोडीहरू फेला पार्नुहुन्छ, तब यसको मतलब यो जोडी आवश्यक रूपमा हुन्छ। यी दुई कक्षहरूमा उपस्थित हुनुपर्दछयहाँ मात्र प्रश्न खडा हुन्छ जुन प्रत्येकमा एक हुन्छ।
कुनै लेबलहरू छैन
यदि तपाइँको सुडोकुको संस्करण अंकको साथ आउँदैन वा यदि तपाइँ मार्कहरू प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न भने, त्यहाँ अर्को धेरै साधारण रणनीति पनि छ जुन तपाइँलाई यस खेल मास्टर गर्न मद्दत गर्दछ।
क्रस लाइनहरु को तकनीक व्यापक रूप मा प्रयोग गरीन्छ, यसको प्रयोग को महान सादगी को कारण। समावेश गर्दछ नम्बर छनौट गर्नुहोस् जुन सम्पूर्ण तालिकामा प्रायः देखा पर्छ र कोर्नुहोस् (पेन्सिल संग ताकि भ्रमित नहोस्) प same्क्तिहरू र स्तम्भहरूमा लाइनहरू जुन समान नम्बर सम्बन्धित छ।
सबै रेखाहरू कोर्ने पछि, हामी ती समान प in्क्तिहरूमा समावेश नभएका सेलहरू मार्किंगको चरणमा जान्छौं। त्यसो भए, यो विश्लेषण गरिएको छ कि कुन 3x3 ग्रिडहरूमा नम्बर9छैन र जससँग ठाउँ राख्न (क्रस आउट छैन) यसलाई राख्न।
एक पटक यो सकिएपछि, अर्को नम्बर छनौट गर्नुहोस् र उही रणनीति दोहोर्याउनुहोस्, जब सम्म सबै कोषहरू भरिदैनन्। अन्त्यमा, तपाईंले जाँच गर्नु पर्छ कि त्यहाँ समान लाइन वा ग्रिडमा दोहोर्याइएको नम्बरहरू छन् कि छैनन्। यदि त्यहाँ दोहोरिने संख्याहरू छैनन्, तब खेल जित्दछ।
समय र कठिनाई खेल्नुहोस्
प्रत्येक सुडोकु पज्जलका लागि अधिकतम समय हुँदैन, र प्रत्येक खेलाडीले उनीहरूले चाहेको रूपमा खेलको मज्जा लिन सक्छन्।
एक सुडोकु खेल यो and र minutes5मिनेट बीचमा भिन्न हुन सक्दछ, तर यो सबै खेलाडी को अनुभव र खेल को कठिनाई को स्तर मा निर्भर गर्दछ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, खेल कडा भयो, अधिक तर्कको आवश्यक छ, त्यसैले खेल लामो समय लिन सक्दछ।
कठिनाई को रूप मा, यो प्राय: वेबसाइट वा पत्रिकाको शीर्षकमा स्पष्ट हुन्छ। शुरुआतीहरूका लागि सजिलो खेलहरू छन् र अधिक अनुभवी खेलाडीहरूका लागि धेरै गाह्रो। विज्ञहरूको लागि, अधिक गाह्रो स्तरहरू वास्तवमै चुनौतीपूर्ण हुनसक्दछ, किनकि स्तरहरू धेरै सममितीय देखिन थाल्छन्, जसमा संख्याहरू प्रतिबिम्बित भएको देखिन्छ। त्यसकारण, आधारभूत तर्कको अतिरिक्त, तपाईंलाई पनि एक निश्चित रणनीति चाहिन्छ।
र त्यसैले लेख समाप्त हुन्छ। बधाई छ! अब तपाईंलाई थाहा छ सुडोकु कसरी खेल्ने, वा कम्तिमा तपाईंसँग यी पजलहरू समाधान गर्न पर्याप्त ज्ञान छ!